गुगल नक्शामा यूटीएम निर्देशांक - जिओफुमाडास
घर/कार्टोग्राफी/गुगल म्याप्समा UTM समन्वय
कार्टोग्राफीFeaturedगुगल अर्थ / नक्सानवाचारै
गुगल म्याप्समा UTM समन्वय
गुगल सायद एक उपकरण हो जुन हामी लगभग साप्ताहिक रूपमा बाँचिरहेका छौं, यो सोच्न को लागी प्रत्येक दिन होईन। जे होस् अनुप्रयोग विस्तृत रूपमा नेभिगेट गर्न र ठेगाना मार्फत प्रयोग गरिन्छ, यो खास पोइन्डको निर्देशांक हेर्न यत्ति सजिलो छैन, न भौगोलिक ढाँचामा, धेरै कम निर्देशांकहरू युटिएम google maps मा
यो लेख, Google नक्सामा समन्वय कसरी दृश्यात्मक दृश्य देखाउन यो लेख, एक्सेलमा समकक्षहरूलाई समन्वय गर्ने, तपाईंलाई UTM मा कन्वर्ट गर्न र AutoCAD मा पनि आकर्षित गर्न एक विशेषज्ञ हुन सिकाउनेछ।
यूटीएम गुगल नक्शामा समन्वय गर्दछ
अघिल्लो प्रदर्शनमा, Google नक्सा दृश्य देखा पर्दछ, स्थिति विकल्प खोज्नको लागि आवश्यक विकल्पहरूको साथ। तपाईं माथिको विशेष ठेगाना, वा शहरको नाम, वा माथि दायाँ डिस्प्लेमा फेला परेको सूचीबाट खोजी गरेर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
एकपटक चयन गरियो, नक्सा चयनित ठेगानामा स्थित छ।
हामी नक्शामा कुनै पनि क्लिक गर्न सक्छौं, र हामी दशमलव ढाँचामा समन्वयको सूचक देखाउँछौं र sexagesimal पनि (डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड) पनि।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, दशमलव निर्देशांक १ .19.4326077 ..99.133208०19,, -.99 .19..25। यसको मतलब भूमध्य रेखा भन्दा १ degrees डिग्री र ग्रीनविच मेरिडियनबाट पश्चिममा degrees 57.39 डिग्री हुन्छ, त्यसैले यो नकरात्मक हो। उही तरीकामा, यो भौगोलिक समन्वय अक्षांश १ º º २′ ′ .99′.7 ″ N बराबर छ, देशान्तर ººº ′ ′ .59.55 .XNUMX ″ डब्ल्यू। माथिल्लो भागले देखाउँछ UTM समन्वय X = 486,016.49 Y = 2,148,701.07 जो उत्तरी गोलार्धमा 14 क्षेत्रसँग मेल खान्छ।
तयार यसको साथ तपाईंले गुगल नक्सामा पोइन्ट पत्ता लगाउन सिक्नुभयो र यसको युटीएम निर्देशांक जान्नुहोस्।
Google नक्साको थुप्रै समन्वय कसरी सुरक्षित गर्ने।
अघिल्लो, यो व्यक्तिगत भौगोलिक समन्वय र युनिवर्सल ट्रान्सोडो डे मर्जेटर (यूटीएम) मा यसको समन्वय कसरी व्यक्त गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ।
यदि हामी Google नक्सामा धेरै बिन्दुहरू बचत गर्न चाहन्छौं र एक एक्सेल फाईलमा देख्न चाहन्छौं, त्यसपछि हामीले यस प्रक्रियालाई पछ्याउनु पर्छ।
हामीले हाम्रो जीमेल खाताको साथ Google नक्सामा प्रविष्ट गर्यौँ।
बायाँ मेनुमा हामी "तपाईंको ठाउँहरू" विकल्प चयन गर्छौं। यहाँ हामीले लेबल गरेका बिन्दुहरू, मार्गहरू वा नक्साहरू जुन हामीले बचत गरेका छौं देखा पर्नेछ।
यस खण्डमा हामी "नक्सा" विकल्प छान्छौं र नयाँ नक्सा सिर्जना गर्छौं।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ लेयरहरू सिर्जना गर्न यहाँ धेरै प्रकार्यहरू छन्। यस अवस्थामा मैले भेरिपिक्सको created पोइन्ट र बहुभुज पनि सिर्जना गरेको छु। जे होस् कार्यक्षमता सरल छ, यसले तपाईंलाई रंगको पोइन्ट, बिन्दुको शैली, वस्तुको वर्णन परिवर्तन गर्न र प्रत्येक भेरिकोमा छवि थप्न अनुमति दिन्छ।
त्यसोभए तपाईं आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा सर्नुभयो र सतहहरू कोर्नुभयो जुन तपाईंलाई आवश्यक लाग्छ। यो भ्याटेरिक्सका लागि एउटा लेयर, टेर्रेन बहुभुजहरूका लागि अर्को लेयर र भवनहरूको लागि अर्को लेयर हुन सक्छ, यदि तपाईं तिनीहरूलाई लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने।
एक पटक समाप्त भएपछि, यसलाई डाउनलोड गर्न, तीन ठाडो डटहरू चयन गर्नुहोस् र यसलाई निम्न किलमा देखाइएको kml / kmz फाइलको रूपमा बचत गर्नुहोस्।
Kml र kmz फाईलहरू Google नक्सा र गुगल अर्थको ढाँचा हुन् जसमा समन्वय, मार्गहरू र बहुभुजहरू भण्डार गरिएका छन्।
तयार तपाईंले Google नक्सामा बिभिन्न पोइन्टहरू बचत गर्ने र तिनीहरूलाई किमीएट फाईलको रूपमा डाउनलोड गर्ने तरीका सिकेका छौं। यहाँ छ कि कसरी यी निर्देशांकहरू एक्सेलमा प्रदर्शन गर्ने।
कसरी एक्सेलमा Google नक्सा समन्वयहरू हेर्नुहोस्
एक किमीजेड संकुचित किमीएल फाइलहरूको एक सेट हो। त्यसो भए अनजिप गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका यो छ कि हामी .zip / .rar फाईलको साथ गर्छौं।
निम्न ग्राफिकमा देखाइए जस्तै हामी फाईल विस्तार देख्न सक्दैनौं। यो गर्न, हामीले निम्न गर्नुपर्दछ:
फाइलहरूको विस्तार हेर्ने विकल्प फाइल एक्सप्लोररको "दृश्य" ट्याबबाट सक्रिय गरिएको छ।
विस्तार .kmz बाट .zip मा परिवर्तन गरिएको छ। यो गर्नका लागि फाईलमा सफ्ट क्लिक क्लिक गरिन्छ, र डाटा जुन पोइन्ट पछि हुन्छ। हामी देखा पर्ने सन्देशलाई स्वीकार गर्दछौं जसले हामीलाई फाईल एक्सटेन्सन परिवर्तन गर्दैछौं र यसले यसलाई प्रयोगहीन बनाउन सक्दछ।
फाइल असम्पीडित छ। दायाँ माउस बटन, र "Extract to..." चयन गर्नुहोस्। हाम्रो अवस्थामा, फाइललाई "जियोफ्युम्ड क्लासरूम ल्याण्ड" भनिन्छ।
हामी देख्न सक्छौं, एउटा फोल्डर सिर्जना गरिएको थियो, र ठीक भित्र तपाईंले "doc.kml" भनिने kml फाइल र सम्बन्धित डेटा, सामान्यतया छविहरू समावेश गर्ने "फाइलहरू" नामक फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ।
Excel बाट KML खोल्नुहोस्
KML एक स्वरूप हो जुन गुगल अर्थ / मानचित्र द्वारा लोकप्रिय छ, जो कि किहोल कम्पनी भन्दा पहिले थियो, यसैले नाम (किहोल मार्कअप भाषा), यसैले, यो एक फाईल हो XML संरचना (एक्सटेन्सिबल मार्कअप भाषा)। त्यसोभए, XML फाईल भएर यो एक्सेलबाट हेर्न सक्षम हुनुपर्दछ:
1 हामीले .kml बाट .xml बाट यसको एक्सटेन्सन परिवर्तन गर्नुभयो।
२. हामी एक्सेलबाट फाइल खोल्छौं। मेरो मामलामा, कि म एक्सेल २०१ using प्रयोग गरिरहेको छु, म एउटा सन्देश पाउँदछु यदि म यसलाई XML तालिकाको रूपमा हेर्न चाहन्छु, पढ्ने-मात्र पुस्तकको रूपमा वा यदि म XML स्रोत प्यानल प्रयोग गर्न चाहान्छु। म पहिलो विकल्प चयन गर्दछु।
3 हामी भौगोलिक समन्वयहरूको सूची खोज्छौं।
4 हामी तिनीहरूलाई नयाँ फाइलमा प्रतिलिपि गर्छौं।
र भोईला, अब हामीसँग Google नक्सा निर्देशांक फाईल छ, एक एक्सेल तालिकामा। यस अवस्थामा, प row्क्ति १२ बाट सुरू गरेर, स्तम्भ U मा शीर्षको नामहरू देखा पर्दछ, स्तम्भ V मा वर्णन र अक्षांश / देशान्तर निर्देशांक स्तम्भ X मा।
त्यसोभए, X स्तम्भहरू र अह स्तम्भ प्रतिलिपि गरेर, तपाईँसँग वस्तुहरू छन् र तपाईंको Google नक्सा बिन्दुहरूको समन्वय।
अरू केही चासो राख्नुहुन्छ?
Google नक्साबाट UTM लाई कन्फिगरेसन कन्वर्ट गर्नुहोस्।
अब, यदि तपाईं ती भौगोलिक समन्वयहरू कन्फिग गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईसँग अक्षांशको दशमलव डिग्रीको रूपमा रहेको छ र अनुमानित UTM समन्वय ढाँचामा देशान्तर देशान्तरमा, त्यसपछि तपाइँ यसको लागि अवस्थित टेम्प्लेट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
UTM निर्देशकहरू के हुन्?
UTM (युनिवर्सल ट्र्रावरो मर्कटर) एक प्रणाली हो जुन 60 क्षेत्रहरु को6क्षेत्रहरु मा विश्व को विभाजित गर्दछ, एक ipipsoid मा अनुमानित एक ग्रिड जस्तो गणितीय तरिका मा परिवर्तित; जस्तै यस लेखमा वर्णन गरिएको छ। र यस भिडियोमा.
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ तपाइँ माथि देखाइएको निर्देशांकहरू प्रतिलिपि गर्नुहुन्छ। नतिजाको रूपमा तपाईसँग X, Y निर्देशांक र UTM जोन हरियो स्तम्भमा चिनो लगाईनेछ, जुन उदाहरणमा जोन १ 16 मा देखा पर्दछ।
AutoCAD लाई Google नक्शाको समन्वय पठाउनुहोस्।
AutoCAD मा डाटा पठाउनको लागि, तपाईंले भर्खर मल्टिपोइन्ट कमाण्ड सक्रिय गर्नुपर्नेछ। यो "ड्रा" ट्याबमा छ, जस्तै दायाँपट्टिको रेखाचित्रमा देखाइएको छ।
एकपटक तपाईंले बहु बिन्दु आदेश सक्रिय गरेपछि, पछिल्लो स्तम्भबाट, डाटाको प्रतिलिपि एक्सेल टेम्प्लेटबाट टाढा र पेस्ट गर्नुहोस्।
यससँग, तपाईंको निर्देशांकहरू कोरिएको छ। तिनीहरूलाई हेर्न, तपाईं जूम / सबै गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं टेम्प्लेट किन्न सक्नुहुन्छ Paypal वा क्रेडिट कार्डको साथ। टेम्प्लेट प्राप्त गर्नाले तपाईंलाई टेम्प्लेटसँग समस्या भएको बेलामा ईमेल द्वारा समर्थन गर्ने अधिकार दिन्छ।
Google Chrome 30 महिना पछि
xfavor कसरि कन्फिगरेसन मा ठेगाना बदलन को लागि
हेलो मलाई UTM सहकारीहरु, लन्च र लैटिडिडमा ADDRESSES भेट्न आवश्यक छ, हाहा जस्तै
मैले मेरो फोनमा मेरो utm समन्वय लागू गर्न आवश्यक छ किनकि म धन्यवाद गर्दछु
म बुझ्छु तर म एस्पियानोल मा यो व्याख्या गर्न सक्दैन:
Google नक्शालाई दशमलव ढाँचामा समकक्षहरूको आवश्यकता छ त्यसैले तपाईंले यसलाई प्रदर्शन गर्न आफ्नो UTM समन्वय कन्वर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो वेबसाइटमा UTM निर्देशांकहरू रूपान्तरण गर्नुहोस् - http://www.hamstermap.com र तपाईं तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्न google नक्साहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाइँसँग प्रदर्शन गर्न धेरै ठाँउहरू छन्, तपाईले तिनीहरूलाई Google नक्सामा एकदम राम्रो साइटमा QUICK MAP उपकरण प्रयोग गरेर राख्न सक्नुहुन्छ।
के हुन्छ भने यो Google अनुप्रयोग होईन, यद्यपि यसलाई क्रोमको लागि विकसित गरिएको छ।
र मलाई लाग्छ कि गुगलले अन्य कम्पनीहरूको फाइदा लिन र विकासको लागि आधारभूत चीजहरू पनि छोड्छ ...
Tremendo the programita, म यसलाई अहिले स्थापित गर्नेछु। के मैले बुझिनँ कि उनी क्रोम होईन गुगलको बाहेक सबै ब्राउजरहरूका लागि मानक लागू कसरी गर्दैनन्, सबै प्लेटफार्महरूमा गुगल नक्शाको प्रयोगलाई सुविधा दिनेछ।
लुइस डे ला क्रुज भन्छिन्:
धेरै राम्रो धेरै राम्रो… .. सहयोगका लागि धन्यवाद ... एक ब्रूडर पनोरम .. अब म भएको छ।
यो ठीक छ, निःशुल्क सफ्टवेयर डाउनलोड थियो मलाई बताउन कसरी ती सबै referncias काम गर्न, lagoons तटों mangroves द्वारा धेरै बन्द मा स्थलाकृतिक वृद्धि लागि धेरै उपयोगी र मलाई आह पक्ष काम र एह Google हृदय प्रयोग र धेरै फरक यो थप छ पूरा।
Agrim। एन्टोनियो पी। Rodriguez भन्छिन्:
जियोफुमाडास द्वारा प्रकाशित लेखहरू धेरै उत्कृष्ट, धेरै रोचक छन्, यो जारी राख्नुहोस्।